၆သွားဒဲ့သဂျီး Gay | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ၆သွားဒဲ့သဂျီး Gay
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Aug 5, 2013 in Aha! Jokes, Satire, Gay/Lesbian | 25 comments
“သဂျီးခြောက်သွားပီ…” ရွာထဲတွင် အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်ကုန်သည်။ “ဟုတ်ပါ့မလားဟယ်…. မနေ့ဃဒင် အကောင်းဂျီး၊ မာဆက်မှာတောင် တွေ့လိုက်သေးဒယ်” “အေးလေ ငါလည်းသူနဲ့ 69ဇိမ်ခန်းမှာ တမြန်နေ့ဂ ဆုံမိဒေါ့ တဆက်ရှင်နဲ့ မလောက်လို့ အချိန်ပိုကြေး ပေးရဒါ ညည်းနေသံကြားတယ်” “အဲဒါတော့ အသိဗူးဗျာ အခုဒင် လောလောလတ်လတ် ထွက်လာဒဲ့သဒင်း၊ မယုံ ကိုယ်ဒိုင်သွား မေးဂျေ” ကကြောင်ကြီးနှင့် မန်းဂေဇက် ရွာသူားများ အချေအချ ပြောဆိုသံဖြစ်သည်။ သံသယဖြစ်မည်ဆိုလဲ ဖြစ်လောက်စရာပင်.. တိုင်းသိပြည်ကျော် ရှာပွတ်ခိုမ်ဟု နာမည်ကြီးနေသည်မှာ အကြောင်းမဲ့မဟုတ်၊ ချဲကြွေးပေးဖို့ မရှိသဖြင့် အကြံကုန် ဂဠုန်ဆားချက် လျှာပွတ်ဆေး ဖော်ရောင်းရာမှ ကံကောင်းထောက်မ၍ ကျိကျိတက် ချမ်းသာလာပြီး ဘဝမေ့ဂါ ကာမစည်းစိမ် မပြတ်ရှာဖွေ ခံစားလွန်းသူ၊ တခုမဟုတ်တခု မပွတ်ရလျင် မနေနိုင်သူဖြစ်သည်။ ယခုမူ သူများ ပွတ်ရ၍ အားမရ ကိုယ်တိုင် အပွတ်ခံလေပီ..။ တန်ဆေးလွန်ဘေး မသိရော့ထင့်…။
သဂျီးအိမ်အနီး လူအများ ရစ်သီရစ်သီလုပ် မေးငေါ့နေသလို နပ်ဂဒေါ် မာမီပုဆီတွင်လည်း လူစည်ဂါးနေသည်။ “ဒါ..ဘဝဟောင်းက အဆက်ပျံပေါ်တာခေါ်ဒယ်၊ သဂျီးဦးခိုင်မ် အတိတ်ဘဝ တခုမှာ ဂရိစစ်ဘုရင် အလက်ဇန္နား ကိုယ်ရံတော် ဖြစ်ခဲ့ဖူးဒယ်။ သူနဲ့ဘုရင်ဂျီး ရှေ့တန်းထွက်ခိုက် နင်ပီးငါ့အလှည့် ဆော်ပလော်တီးနေဂျဒုံး ရန်သူ ပစ်လိုက်တဲ့ လက်နက်ကြီးမိသေတော့ မဟာအဝီဇိငရဲကျဒယ်။ ကံကြွင်းကံစလေး ကျန်နေသေးတော့ ငရဲမင်း အပြောင်းအလဲမှာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရပြီး ပုဒ်မ၄၀၁နဲ့ လွတ်လာတာ။ အပြီးလွတ်တာ မဟုတ်သေးဘူး… သူမဟုတ်မဟတ် ထပ်လုပ်ရင် အရင်ကြွေးကျန် ကာလတွေပါ ပေါင်းခံရမှာ။” “သမဒဂျီး ဦးသိန်းစိန်ဂ ငရဲမင်းဂျီး ဘဝကလာတာ၊ အဲဒီအုပဒေကို အခု နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပျံလွှတ်တဲ့အခါ မလည်ရှုပ်လုပ် သုံးနေဒါ” သမဒဂျီးမှ သမဒဂျီး ဖြစ်နေသော ရွာသူားအချို့ မကျေမနပ် ဖြစ်သွားသည်။ ၁၅၀၀ဒံ ဆင်းမ်ကတ်ရ၍ ပျော်မဆုံးဖြစ်နေသူ အရီးလတ် အဆိုးဆုံးပင်.. ကြည့်အုံး ခွန်းတုံ့ပျံသည့် သူ့စဂါး.. “အိုး.. ငရဲပြည်ဂလာလာ အသူရကာယ်ပြည်ဂ လာလာ… စစ်ဗိုလ်တွေထဲမှာ သူအရိုးသားဆုံး.. နေပြည်တော်မှာ ဧကငါးရာရှိတဲ့ ခြံကြီးရယ်၊ ဒေါ်လာသန်းချီ တန်တဲ့ ဆန်စက်၊ သိုလှောင်ရုံ၊ မွေးမြူရေးခြံတွေရယ်ပဲရှိဒါ” “ကမ္ဘာအေးမှာ အိမ်ကြီးတလုံး ရှိပါသေးတယ်ဗျ” “အေးလေ စစ်တပ်ဦးပိုင်မှာလည်း ရှယ်ယာဝင်ထားတာ သိန်းဘယ်နှစ်သောင်းဆိုလဲ” “စင်ကာပူဘဏ်တွေမှာ အပ်ထားတဲ့ ဒေါ်လာဆယ်သန်း ဘယ်သွားထားတုံး” “ဒူဘိုင်းမှာ ဝယ်ထားတဲ့ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းကြီးဆို ဟီးထ နေတာပဲ၊ တလာကတောင် လန်ဒန်မြို့လယ်ဂေါင်မှာ အိမ်ထပ်ဝယ်သေးတယ်ဆိုလား” မှောင်ရိပ်ထဲမှာ ပွစိပွစိ အတင်းပြောသံများ ဆူညံထွက်လာသည်။ “အိုကွယ်.. ဒါတွေက သူ့သားသမီး နာမည်နဲ့ ဝယ်ထားတာတွေပါ၊ သမဒဂျီး ဂဒေါ်ဆို အငြိမ်းစားယူရင် မုန့်ဟင်းခါးတောင် ရောင်းအုံးမှာ” အိမ်ရောင်းရသဖြင့် ပွဲခမြိုးမြိုးမျက်မျက် ရထားသူ လန်ဒန်မြို့သား အရီးလတ် မလုံမလဲ ဖြစ်သွားသည်။ “ဟုတ်ပ၊ ဒါကြောင့်ထင်တယ် သမဒဂျီးဂဒေါ် ကုမ္မဏီထောင်ပီး ငါးဖမ်းထာ ပင်လယ်မှာ ငါးမျိုးတုံးသလောက် ဖြစ်နေပီ”
သဂျီးသဒင်းမှ သမဒဂျီးအတင်း ဖြစ်သွား၍ သဂျီးပေါဂွင့်ရပုပ်ကိုယ် ဦးရဲစည် ကြေငြာချက် အမြန်ထုတ်ရသည်။ “အဟမ်း.. ကောလာဟာဠတွေ မယုံဂျပါနဲ့.. သဂျီးအကောင်းပတိ ရှိပါသေးဒယ်။” “ဒါဆို သဂျီးခြောက်သွားဒဲ့ သတင်းငြင်းရဲလား။ ဟုတ်တယ် ပြောပါ၊ သဂျီးခြောက် မခြောက်” လူအများ တောင်းဆိုရာမှ ဆန္ဒပြပွဲကြီးအသွင် ဖြစ်သွားသည်။ မတတ်သာသည့်အဆုံး တရုတ်ပြည်တွင် အီတွန့်ဗွမ် သိုင်းသင်တန်း တက်ထားသော လူမိုက် ကြေးမုံဂျီးအား ခေါ်ယူလိုက်ရသည်။ ကြေးမုံဂျီးဂါး မိုက်တိမိုက်ကန်းနှင့် မစဉ်းမစား ရိုက်မည်နှက်မည် တဂဲဂဲ..။ အခုမှ ခက်ချေပီ.. တဂယ်ဒေါ့ သဂျီးအကြောင်း ဘယ်သူမှ မယ်မယ်ရရ မသိ၊ ဘယ်ရောက်နေမှန်းလည်း မသိ၊ သူ့တာဝံဂ သဂျီးကုန်းနေလျင် ပိုက်ဆံကျပျောက်၍..၊ မှောက်နေလျင် ရင်နာ၍…၊ မှုတ်နေလျင် သွားယား၍…. ဆင်ခြေဆင်လက် ပေးရန်သာဖြစ်သည်။ သူကိုယ်တိုင်ပင် တခါတခါ မယုံသင်္ကာ ဖြစ်မိ၏။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်သည်၊ ဒီပိုးဆိုတာမျိုးက အဖျောက်ရခက်သည်။ ဘယ်လာက်ဖုံးဖုံး ချက်ကောင်းသွားစမိလျင် ထောင်းဂနဲ ထလာတတ်သည်။ ရွာထဲသို ဖြိုးဒစ်ချူဆိုသူ ရောက်လာပီးကထဲက သဂျီးပုံစံပြောင်းသည်။ နဂိုထဲမှ ဂဏှာမငြိမ် မိုးပျာမှ မာမူ ယခုနောက်ဆုံး မာမီဖြစ်ချေပြီတမုံ့..။
သဂျီးကား မတုန်လှုပ်.. အင်းမလုပ် အဲမလုပ်.. မသိ၊ မမြင်၊ မကြားသည့်အလား နေနိုင်လွန်းလှသည်။ နောက်မှ သိရသည်.. သူချောက်မြို့သွားဂျင်းအား ခြောက်သွားသည်ဟု အထင်မှားဂျဂျင်းဗင်….. ကဲ့ရဲ့ ခုနှစ်ရက်၊ ချီးမွှမ်း ခုနှစ်ရက် ထုံးနှလုံးမူနိုင်သော လောဂဓံတရား နားလည်သည့် သူဒေါ်ဂေါင်းဂျီး အယာရှည်မလာ ခိုမ်မေနီအား ပြစ်မှားမိပီ..။ သဂျီးဂါး ဝမ်းသာဝမ်းနည်းဟန် မပြ.. ကုန်းမြဲကုန်း မှောက်မြဲမှောက် မှုတ်မြဲမှုတ်လျက်သာတီး..။ ၍စာဇုဖြင့် သူဒေါ်ဂေါင်းဂျီး ရှာပွတ် မာမွတ်ခိုမ်အား အကျွန်ုပ်ကြောင်ကြီး ဝမ်ချတောင်းဗံပါ၏။။။။။
ငယ်ငယ်လေးထဲက နို့မကြိုက်တဲ့ သဂျီး..
သဂျီးကို ၆သွားတယ်လဲပြော၊ ဝမ်ချတောင်းဗံတယ်လည်း ဆိုတော့…
သွားမစမ်း ကိုရင်ကြောင်၊ ကြားဖူးတာတော့ ဘိန်းထိုးတာထက် စွဲသတဲ့… ဟီ ဟိ
သွားမစမ်းနဲ့ လို့ပြောတာဗျ၊ စာလုံးကျကျန် ခဲ့လို့… ဟီး ဟီး
” မိုးပျာ မှ မာမူ ယခုနောက်ဆုံး မာမီ ဖြစ်ချေပြီတမုံ့ ”
ဒို့ သူဂျီး မလဲ ၊ ဘဝ ခဏ ခဏ ပြောင်းရှာသကိုး ။
ခစ် ခစ် ခစ်….
ဖျစ်မှဖျစ် ရ လေ သဂျီးရယ်
မာမီခိုင် ခင်ဗျာ အင်တာဗျူးလေး လုပ်ခွင့် တောင်းဆိုပါတယ်။ အာဟိ..(ခွင်ကျုံတုန်းလေး ဖဲလိုက်မှ) ခွီခွီ
sွဲsွဲ ထဲ့ခံရတဲ့ ကြေးမုံကြီး
နောက် .. ကြီးကတော့ ရှော့ရှိတယ် …
ဟိုလိုလို ဒီလိုလို လုပ်နဲ့လေ
ရွာထဲ မာမီဖြိုး ရောက်ပြီဆိုထဲက
ရွာထဲ စည်စည် ကားကားကို ဖစ်လို့..ဟားးးးးးးးးးးးးးးးးးး
တဂျီး က ၆ သွားရင် အပြန် အုန်းမှန်ကူလေး ဝယ်ခဲ့ပေးပါနော်။
အဲ့လောက် ဘ၀စုံတဲ့ သဂျီးမျိုး တခါမှမတွေ့ဖူးဘူး..
အူးကြောင် ပြတဲ့ ပုံက နည်းနည်းလေးတွဲနေသလားလို့..
” အူးကြောင် ပြတဲ့ ပုံက နည်းနည်းလေး တွဲနေသလားလို့ ”
တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကိုရင် ။ သူ့ Comment ဖတ်ရတာနှင့် ။
ဟုတ် မဟုတ် ဒီ Post ကို နောက်တစ်ခါ ပြန်လာကြည့်ရတယ် ။
မှတ်ထား ၊ ဒီလောက် ကြီးနေမှတော့ ၊ နဲနဲတော့ –ွဲ လိမ့်မပေါ့ ။
ဒီလောက် ၊ ဇီဇာ ကြောင်နေရင် ၊ လူပျိုကြီး ဖြစ်လိမ့်မယ် ။
ဟဲ.. အဘဖော ဂရဲ… အမြင်တွေက မတွေ့ရတာကြာတော့ ၀ါးချင်နေပီလေ…။
၁၄ လ လုံးလုံး လူပျိုစစ်ခဲ့ပါတယ်အဘရယ်….
ဇီဇာကြောင်တတ်ပါဘူး အဘရယ်… ဘယ်ခွက်နဲ့သောက်သောက်…
ရေဟာ ရေပဲပေါ့နော်… ပင်လယ်ကြီးလို စိတ်ဓါတ်မျိုး သမီးလေးတွေကို
ဟီး … ကိုခင်ခရဲ့ စကားလေး ခဏ ငှါးသုံးပါမယ်….
ဂေး လား ဟေ့ မောင်တို့ ဂေးလားဟေ့ မောင်တို့ ..
၀မ်းစမိုး သံ သော သောညံ ….
ကျနော်လည်း ဒီသတင်းကြားကြားချည်း သိပ်မယုံဘူးဗျ …
သို့လော သို့လောတွေပေါ့ … ဒီတောဂါ မပြောမဖြစ် ပြောရ ဖွင့်ချရတော့မပေါ့
” မ သုံးလုံးဂိုဏ်းနှင့် ပျောက်ဆုံးသွားသော ဖြတ်၊ဖေါက်၊ချုပ် ကျမ်းကြီး ” ဆိုပီး စာတပုဒ်လောက် ရေးဦးမှ
ဒန့် တန့် တန့်
ဒီတခါပို့စ်တော့ အရင်ကဟာ တွေနဲ့တောင် သိပ်မတူဘူးဗျ။ စာဖတ်ရင်းကို ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မိတယ်။ အခုတော့ မာမွတ်ခိုင်ကနေ မာမီခိုင် ဖြစ်သွားပြီ။
သင်္ဂျီးသမီးမပေးသရွှေ့ ခြောက်လိုက် မွတ်လိုက်နဲ့
နောက်ဆို ဘာဖြစ်မှာလဲဟင် ..
အော် ဒဂျီးက ငယ်ငယ်လေးထဲက လိင်ကွဲကို ကျိမရဒါဂိုးးးး
Ferrari ကား လေး တစ်စီး စာ ပိုက်ဆံ လေးကိုများ အကြီးအကျယ် သတင်းလုပ် ထုတ်ပြ နေရသေး။
ဟိဟိ.. သဂျီးဘွလည်း သနားဇယာ…
သဂျီးသမီးကို မရတာနဲ့ သဂျီးလည်း ရစရာမချိ ဖစ်နေတယ်… အူးကြောင်… စပျစ်သီးချဉ်တာလား..ခိခိ..
ဒဂျီးတော့ တနားဇယာ။ အဲလိုဒွေပျောနေလို့လဲ ရွာကိုခဏခဏ ဟိုဘက်ရွှေ့လိုက် ဒီဘက်ရွှေ့လိုက်လုပ်နေ ဒါဖစ်မယ်။ အိုအာဂျီ လိုက် စီအိုအမ်လိုက်။ သများဒို့လဲလိုက်လိုက်ရွှေ့နေရဒါ။ ဒါဒဂျီးတက်တက်မဲ့ ပညာပြနေ ဒဂိုး။
ပြန် ဖတ်ပြီး ပြန်ရယ်မောသွားပါတယ် ဦးကြောင်
ပြီးတော့ မဖတ်လိုက်ရသူတွေ ပြန်ဖတ်နိုင်အောင်
ဒီပိုစ့်ရဲ့ လင်ခ်ကို ပြန်ရှယ်ပါရစေခည
18 ရက်နေ့ မှာ ပြန် ရှယ်ပါမယ်